Xildhibaan Mahad Salaad oo si kulul uga hadlay fal kufsi fool xun oo ka dhacay Guriceyl – Kalfadhi
GURICEYL, 22 JAN 2019 (KALFADHI)-Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay fal kufsi ah oo ka dhacay degmada Guricey ee gobolka Galgaduud. Xildhibaanka ayaa ayaa fal fool xun ku tilmaamay arinta ka dhacday degmada Guriceyl waxa uuna dalbaday in cadaaladda la waafajiyo dadkii ka dambeeyay falkaasi.
Qoraal uusoo dhigay bartiisa Internet-ka ayuu ku sheegay in afar wiil ay kufsiga ka dambeeyeen, Ciidamada ammaanka ayuu Xildhibaan Mahad Salaad sheegay iney qabteyn saddex ka mid ah halka kan kalana lagu raad-joogo.
“Waa foolxumo midii ugu xumeed in gabar yar oo aan qaan gaarin inta la xoogo hadana laga duubo muuqaalo argagax leh, waana arin ka baxsan Islaamnimada iyo dhaqankeena suuban ee Soomaaliyeed”, ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad oo bartiisa facebook soo dhigay qoraal kooban. “Aabaha gabadha dhalay oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in gabadha da’deedu tahay 14 sano jir Dugsi Sare galaysay sanadkaan. Wiilasha kufsadayna ay ahaayeen afar, hadana sadex kamid ah ay ku xiranyihiin saldhiga degmada Guriceel”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Mahad Salaad oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya
Aabaha dhalay gabadha ayaa Kalfadhi u sheegay in gabadha oo dhaawac ah loo qaaday Isbitaal ku yaalo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, dhaqaatiirta caafimaadka ayuu sheegay iney la tacaalayaan dhibka soo gaaray.
“Aad ayay ugu mahadsanyihiin maamulka degmada in ay soo qabtaan dhalinyaradaas, waxaanan ugu baaqaynaa madaxda Galmudug iyo maamulka degmada in sharciga la horkeeno dhalinyaradaan falkaas foosha xun geystay. Qoyskaas dhibana cadaalad sax ah ay helaan”, ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal soo dhigay bartiisa Internet-ka.
“Sidoo kale waxaan codsanayaa dhalinyarada ku faafinaysa baraha bulshada muuqaalada gabadha laga duubay in ay ka waantoobaan, Ilaaheyna ka baqaan, meelna aysan uga dhicin sharafta gabadhaan yar ee kuwa wax magarato ah ula dhaqmeen si ka baxsan Islaamnimada iyo dhaqankeena suuban ee Soomaaliyeed”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Warar ay heshay Kalfadhi ayaa sheegayo in magaalada ay ka baxeen qoyskii dhibka gaaray. Sidoo kale wararka aan helnay ayaa sheegaya in Gabadha ay ka soo jeedo beelaha la heyb sooco ee ku nool degmada Guriceyl ee gobolka Galgaduud. Masuuliyiin katirsan Galmudug ayaa Kalfadhi u sheegay in falkaan ay baarayaan sida uu u dhacay cadaaladana la waafajin doono sida ugu dhaqsiyaha badan.